Mpahay lalàna Rabenarivo Sahondra : « Takinay herintaona mialoha ny fitsipi-dalaon’ny fifidianana » | NewsMada
Mpahay lalàna Rabenarivo Sahondra : « Takinay herintaona mialoha ny fitsipi-dalaon’ny fifidianana »
Nivahiny tao amin’ny fandaharana “Ambarao” ao amin’ny onjampeo Alliance 92, omaly, ny mpahay lalàna sady mpikambana eo anivon’ny fiarahamonim-pirenena, Rabenarivo Sahondra. Anisan’ny noresahiny ny hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena. Ampahany amin’ny resadresaka.
Nahitsy ny fanehoan-keviny fa tsy misy mangarahara ary tsy mampatoky ny tsy famoahan’ny fitondrana ny tena tiany hatao. Notsiahiviny, ohatra, fa efa lany andro ny lalàna manokana niatrehana ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013. “Tsy azo ampiasaina intsony hiatrehana ny fifidianana amin’ny taona ho avy izany. Hatramin’izao, tsy mbola fantatra sy tsy mazava ny fepetra na ny mason-tsivana momba ny fifidianana … Tokony havoaka herintaona mialoha ny fifidianana avokoa izany, hahafahan’ny rehetra miomana”, hoy izy. Manahy anefa ny tenany fa mety hanao fanahy iniana hamoahana izany amin’ny fotoana farany ny fitondrana. Tsy matoky ary tsy mino ny tenany fa handeha araka ny tokony ho izy ny fifidianana hatao eo raha tsy misy mangarahara sy maharesy lahatra ny fanomanana sy ny fikarakarana izany, amin’izao herintaona mialoha izao. “Takinay dieny izao ny fepetra rehetra. Ny fampitoviana lenta ny kandidà, tsy misy fiangarana… Mba tsy hiverina intsony ny krizim-pifidianana eto amintsika”, hoy ihany izy.
Tsy misy mangarahara sy manjavozavo
Ankoatra izany, nanteriny fa ilaina ny hahafantaran’ny rehetra ny hataontsika, dieny izao, sy ny lalana hizorana. Noraisiny ho ohatra ny fitakiana fanazavana momba ny resaka pesta sy ity resaka fifidianana ity. “Eo aloha ny momba ny tetibola, hahafantarana ny hataon’ny fanjakana. Tokony hazava koa ny drafitrasa amin’izao tranga miseho eto amin’ny firenena izao satria tsy misy mangarahara ary manjavozavo ny hirosoana any amin’ny fitoniana sy fampandrosoana”, hoy Rabenarivo Sahondra.
Momba ny mety hitantana ny Antanimierandoholona kosa, nambarany fa tsy azo esorina amin’ny toerany ny filohany, Rakotomanana Honoré. “Hany azony atao ny fametraham-pialana raha tsy hoe nanao hadisoana lehibe amin’ny maha filoha azy izy. Azo atao ny fifidianana ny hisolo azy amin’izany. Efa lehibe koa anefa ny tenany ka mety tsy hanasaro-javatra izy ary hanao ny fametraham-pialana amin’ny maha filohan’io andrimpanjakana io azy… Ho hita eo izany atsy ho atsy”, hoy ity mpahay lalàna ity.
Fanafainganana ny famoahana ny voka-pifidianana
Etsy andaniny, nitondrany sosokevitra ny momba ny famoahana ny voka-pifidianana haingana araka ny azo atao manoloana ny ahiahin’ny filoham-pirenena. Nambarany fa tokony hanatsarana ny fomba fampiakarana ny voka-pifidianana any amin’ny tany lavitra andriana ny vola kasaina hanaovana fitsapa-kevi-vahoaka. “Tokony hadihadiana ireo birao fandatsaham-bato sy toerana nanahirana tamin’ny famoahana ny voka-pifidianana… Efa andron’ny “nomerika” sy ny teknolojia avo lenta koa izao”, hoy izy. Nohitsiny fa ho sarotra kokoa ny manova sy manodinkodina ny voka-pifidianana raha mandray fepetra sy mitady vahaolana, araka ireo voalaza ireo, ny rehetra.